Headline Nepal | के वेश्यावृतिको माध्यम बन्दै छ त टिकटक ?
के वेश्यावृतिको माध्यम बन्दै छ त टिकटक ?
२८ पुस, काठमाडौं । चाइनिज एप टिकटक । पछिल्लो समय टिकटक वेश्यावृतिको माध्यम बन्दै गएको छ ।
भाइरल हुने चक्करमा कतिपय युवायुवतीहरुले त अत्यन्तै उच्छृङ्खल र अपाच्य खालका हर्कतहरु पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय टिकटकमा महिलाहरु यति केज्रि बनेका छन् की आफ्नो शरीर समेत प्रर्दशन गर्न पछि हट्दैनन् । उनीहरुले टिकटकका कारण फेसबुक र युट्युवलाई नै बिर्सिसकेका छन् ।
यतिबेला टिकटकमा पैसा कमाउने होडबाजी चलेको छ । टिकटकमा लाइभ बसेर कसैले राम्रो तरिकाबाट पनि लाखौँ, करोडौँ पैसा कमाइरहेका छन् भने कसै - कसैले आफ्नै शरीरलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाइरहेका छन् ।
टिकटकर ऋदम क्षेत्री भन्छन्, ‘टिकटकमा पैसा आउने भनेको लाइभमा बसेपछि गिफ्ट दिएर हो । कहिले विदेशीहरुले अनि, कहिले नेपालीहरुले गिफ्ट पठाउँछन् । गिफ्ट नै पिछे फरक फरक अमाउण्ड राखिएको हुन्छ । त्यसैअनुसार टिकटकबाट पैसा कमाइने हो ।’
उनका अनुसार अहिले पुरुषभन्दा महिलाले टिकटकबाट बढी पैसा कमाएका छन् । किनकी महिलाहरुलाई लाइभमा बढी गिफ्ट आउने गर्दछ । उनी भन्छन्, जब महिला लाइभमा बस्छन् तब देश तथा विदेशबाट हेर्ने नेपाली तथा अन्य देशका पुरुषहरुले राम्रा राम्रा केटी छानेर गिफ्ट पठाउने गर्दछन् । गिफ्ट कै लागि भएपनि त्यसमध्येका कतिपय महिलाहरु यौन धन्दामा लागेका छन् ।’
गृहणीहरु टिकटकमा भुलेर बच्चादेखि आफ्नै घरको काम समेत बिगारिरहेका छन् भने किशोर किशोरीहरुले टिकटकको लत लागेर पढाइ नै बिगारेका छन् । त्यसैगरी, टिकटक बनाउँदा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको देखि टिकटक लाइभमा आएर आत्महत्या गरेको जस्ता समाचार नेपालमा नआएका हैनन् ।
टिकटकका नराम्रा मात्र हैन, राम्रा पक्षहरु पनि छन् । टिकटक मनोरञ्जनका साथसाथै टाइमपासका लागि पनि उपयोगी बनेको छ । आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्ने प्लेटफर्म र सूचनाको स्रोत पनि बनेको छ । टिकटकले नेपालमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदान भनेको चाही नेपाली गीत-संगीतको प्रवद्र्धन हो । नेपाली संगीत क्षेत्रका लागि टिकटक एउटा शसक्त माध्यम बनेको छ । युवापुस्तालाई नेपाली मौलिक लोकसंगीततर्फ टिकटकले तानेको छ । उनीहरु विदेशी गीत-संगीतबाट नेपाली गीत-संगीत, त्यसमा पनि विशेषतः लोकसंगीततर्फ मोडिनु निकै सुखद विषय हो ।
अहिले धेरै नेपाली गीतहरुले टिकटकबाटै यूट्यूवमा भ्यूज बढाइरहेका छन् । कतिपय पुराना र कालजयी गीतहरुलाई पनि टिकटकले युवा पुस्तासम्म पुर्याइरहेको छ । तर यति राम्रो पक्ष हुँदाहुदै पनि टिकटक बन्द हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
‘अहिले धेरैलाई कसरी हुन्छ भाइरल हुनु परेको छ । भाइरल हुने लोभमा युवायुवतीहरु जस्तो पनि अवस्थाको दृश्यलाई प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन । तर, यति गर्दा पनि लाइक-कमेन्ट आएन भने पक्कै पनि उनीहरुमा नैराश्य र चिड्चिडाहट उत्पन्न हुन्छ नै ।’ जसका कारण उनीहरुमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या पनि उत्पन्न भएको अध्ययनहरुले देखाएको छ । टिकटकको प्रयोग नियन्त्रित हुनुपर्ने सुझाव मनोविदहरुले पनि दिएका छन् ।
चाइनिज एप टिकटक
टिकटक वेश्यावृतिको माध्यम बन्दै